राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा राप्रपा बलियो बन्नेछ - विजय थापा, युवा नेता, राप्रपा - Yugantar Khabar | News Portal
राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा राप्रपा बलियो बन्नेछ – विजय थापा, युवा नेता, राप्रपा
Posted on January 12, 2022 by Basanta Pariyar
कमल थापा पराजित हुनु र राजेन्द्र लिङदेनको विजयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
राजेन्द्र लिङदेनको विजय आम नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुको चाहना हो । म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु । कमल थापा आफ्नै रवैयाले पराजित हुन पुगे । उनले धेरै गल्ती गरे । सबैलाई समेट्न सकेनन् । राजेन्द्र लिङदेन विजय भएपछि पार्टीमा ठुलो ध्रुर्वीकरण भएको छ । सबैलाई समेटेर राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको लागि आन्दोलनको तयारी भईरहेको छ । एमसिसि, संघीय गणतन्त्र लगायत देशमा देखिएका सबै एजेण्डाको विरुद्धमा लागिरेको छ । लिङदेन अध्यक्ष भएपछि झन शसक्त भएका छौं । अब सडक आन्दोलन मार्फत यो व्यवस्था फ्याक्दै राजसंस्था र सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्छौं । पृथ्वीनारायण शाहको तीन सय औं जन्म जयन्तीमा राज्यले सार्वजनिक विदा दिएन । यसमा पार्टी अध्यक्षले ध्यानाकर्षण भएको बताईसक्नु भएको छ । अब यस विषयमा लिएर पनि आन्दोलन हुन्छ ।
राप्रपा नेपालको मुल नीति के हो ?
राष्ट्यिता, प्रजातन्त्र र उदारवाद हाम्रो मुल नीति हो । हुन त अर्को राप्रपाको निती पनि त्यहि छ । उहाँहरु त्यो निती अडिन सक्नु भएन । अब यसलाई हामी पूर्ण पालना गर्छौ । हाम्रो पार्टी एजेण्डा राजसंस्था, सनातन हिन्दु अधिराज्य र अखण्ड नेपाल हो । अर्को गास, वास, कपास र रोजगारी जनताले अनिवार्य रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने जोडदार माग रहेको छ । अहिले देशमा लोकतन्त्रको नाममा जुन लुटतन्त्र चलिरहेको छ त्यसका विरुद्ध हामी बोलिरहेको छौं । अब हामी सशक्त आन्दोलनमा जाने छौं ।
नेपालमा राजा जनताले फालेको होइनन् । अब जनताले नै ल्याउँछन् राजा । तत्कालिन माओवादी सडकबाटै आएको हो । अब राजा पनि सडकबाट नै ल्याउनु पर्छ । नेपालमा राजा फाल्दै संघीय गणतन्त्र आयो तर यसले राजनीतिक सथायीत्त्व दिएन । । त्यसैले नेपालमा राजसंस्था जनताले सडकमबाट नै ल्याउँछ, ल्याउनुपर्छ । अहिले चीन र भारतले पनि महसुस गरिसकेका छन् । नेपालको राजनीतिको ट्याक १२ बुदें सहमतिबाट बिग्रिएको हो । आखिर २००७ सालदेखि पछिल्लो जनआन्दोलनसम्म भारतले गराईदिएको थियो भन्ने सुनिन्छ । यहाँ नक्कली राजावादी धेरै छन् । सक्कली त हामी हौं, त्यसैले हामी चुरीफुरी गर्दैनौ । हामी समय कुरेर बसिरहेका छौं । त्यसैले राजालाई सडकबाट ल्याई वर्तमान संविधानको गणतन्त्र रहेको धारालाई संशोघन गरि राजासंस्थाको स्पेश राख्नुपर्दछ । अबको राजनीति त्यहि ढंगले गए मात्र देशको राजनीतिले शान्ति र स्थिरता हासिल गर्नेछ ।
अवश्य पनि हो, यसमा मैले भनिरहनु नै पदैन, हामी सबैले देखे सुनेकै छौं । पार्टीहरुले बोलेको शब्दावली खोई ? देश अविकसित छ, जनता दिनानु दिन कमजोर र गरिव भईरहेका छन् । १७ हजार मान्छे मारेर ल्याएको यो व्यवस्थाको उपलब्धी खोई ? नेपालको जलस्रोत, सुरक्षा र परराष्ट्रमा भारतले आँखा गाडेको भनिएको छ । यसमा हामी नै चनाखो बनेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी राजनीतिक अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल सनातनदेखि पुरानो भूमि हो । हिजो राजा घेराबन्दीमा थिए आज ओली पनि घेराबन्दीमा परेका छन् । यहाँ जुन बोल्ने स्वतन्त्रता भनिएको छ, त्यो छैन सिमित व्यक्तिहरुले मात्र पाएका छन् । देशमा हाल संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुंदैं नयाँ संविधान समेत आएको बताईएको छ । तर व्यवस्था परिवर्तन बाहेक नेपाली जनताको दिनचर्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बरु देश नै नरहने अवस्था पु¥याएका छन्
राप्रपा सडक आन्दोलनकै तयारीमा रहेको छ ।विचार एजेण्डा र नेतृत्व विहिन आन्दोलनले कहिँ कतै पुगिदैन । राजा र जनता विना देश जोगिदैन । हो अहिले शासन सत्ता नै परिवर्तन आवश्यक छ । जसलाई विस्वास उनीहरुबाट धोका मात्र भएको छ । यिनीहरु विदेशीको इसारा विना सरकार चल्नै सक्दैन । हामी आन्दोलन र परिवर्तनको विरोधी होईनौ । राष्ट्रलाई विघटनको बाटोमा लैजाने संविधान र अहिलेको व्यबस्थाको विभेदकारी रहेकाले यसलाई फ्याकी नयाँ व्यवस्था ल्याउनु पर्दछ । किनकि यो संविधानले राष्ट्वादीहरुको ठुलो शक्तिलाइ्र्र निषेध गरेको छ ।
तपाईहरुले पनि अहिलेको अवस्थामा केही गर्न सक्नुभएन नि ?
राप्रपाले पनि राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य र अखण्ड नेपालको एजेण्डामा अडिग रहन सकेन । पाएको जनमतलाई जोगाउन सकेन । नेताहरुबीच व्यक्तिकेन्द्रीत लडाईले पार्टी कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले आज दुख पाईरहेको छ भने एजेण्डा विहिन भएको छ । त्यसरी हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्न बाध्य भयौं । अहिलेको अवस्थामा कम्यूनिष्ट तथा नेपाली कांग्रेसको कुनै आफ्नो विचार छैन, उ अरुको एजेण्डामा समय वर्वाद गरिरहेको छ । यो अवस्थामा राप्रपाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्नू पर्दछ । अब हामी देश र जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभुती दिलाएर व्यवहारिक रुपमै आधुनिक समाजवाद जसमा अहिलेको व्यबस्थालाई भङ्ग गरेर नेपाल र नेपाली भएर बाँच्ने, देशलाई समृिद्धको बाटोमा लगेर जनतालाई भ्रष्टाचार निर्मुल पारी शुसासन र देशको समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनेछौ ।
देशमा कुनै किसिमको आर्थिक उत्पादन छैन । राष्ट्रियता, धर्म र देश नै बेचेपछि पहिचान कहाँ रह्यो र ? राष्ट्रिय एकता र विखण्डनबाट रोक्न पनि राजसंस्था चाहिन्छ भनेका छौं । हाम्रो देश एकल र एकात्मक राज्य हो, धर्म, परम्परा र कला सस्कृतिको रक्षा गर्नका लागी र देशलाई विघटनबाट रोक्नका लागी पनि हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था चाहिन्छ । त्यसैले हामीले देश बचाउन र नागरिकको संरक्षर, स्वामित्वको अधिकार र अस्तित्वको संरक्षरको लागि राजसंस्था भनेका हौं । कुनैपनि कुराको समय आउंछ, त्यसैले सम्पूर्ण तहतप्कामा रहनुभएको आम जनता एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं ।
( राप्रपाका युवा नेता विजय थापासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश)
नेपाल समाजवादी कांग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनाको ७२ औं स्मृति समारोह मनायो
राजनीति, समाजसेवा र व्यवसायलाई संगसंगै अगाडि बढाउंछु- डा. जितेन्द्र घिमिरे, सभापति, राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन नेपाल
केपी ओली भ्रष्ट,दलाल र बिचौलियाका मात्र संरक्षक हुन् : अधिवक्ता घनप्रसाद गौतम ; केन्द्रीय सदस्य नेकपा एकिकृत समाजवादी
काठमाडौं उपत्यकामा देखियो हैजा
सरकारले भुक्तानी नदिएपछि टिचिङ अस्पतालले बन्द गर्यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
विज्ञ टोलीद्वारा सिसडोलको अध्ययन, एक किलोमिटर परको पानीमा समेत प्रदूषण
घट्दै कोरोना संक्रमण
घट्यो पीसीआर शुल्क
नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा काेराेना पुष्टि
ओमिक्रोनको २० वटा लक्षणहरु
रोयल ककनी जनजागरण यूवा क्लव नुवाकोटद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन
Yug prasad dhamala(Hari)